AMISOM: Waxaan isku furaynaa Bay iyo Sh/hoose
Afhayeenka ciidamada AMISOM Cali Aadan Xumad oo waraysi siiyay Warlalis ayaa waxa uu sheegay in qorshaha ciidamada AMISOM ee ku sugan garoonka Baridoogle ee Walaweyn uu yahay inay isku furaan wadada isku xirta Bay iyo Sh/hoose.
Hase ahaatee Cali Aadan Xumad ayaa waxa uu ka gaabsaday wararka sheegaya in ciidamadooda ay hada ku dhaqaaqeen wadada aada Buurhakaba balse waxa uu sheegay in goor ay noqotaba ay dhaqaaqayaan oo ay gaarayaan ilaa magaalada Baydhaba.
Afhayeenka ciidamada AMISOM ayaa waxa uu sheegay in wadada isku xirta Sh/hoose iyo Bay ay muhiimad weyn u leedahay isku socodka Koofurta Soomaaliya sidaasi awgeedna waxa uu sheegay in lama huraan ay tahay in la xoreeyo.
Ciidamada AMISOM ayaa waxa uu sheegay in howlgalkooda uu baahan yahay ciidamo dheeri ah balse hadii aysan helin waxa uu sheegay Afhayeenka inay kaashanayaan ciidamada Soomaaliya iyo shacabka ay qabanayaan dalka si loo soo celiyo amniga.
AMISOM iyo ciidamada dowladda ayaa dhawaan qabtay degmada Walaweyn ee Sh/hoose oo isku xirta gobolada Sh/hoose iyo Bay.